Kule nqaku, uya kufunda indlela yokusebenzisa i-ultrasound ukulahleka kwesisindo.
Inkqubo eyenziwa kwaye isetyenziswe ngeso sixhobo, esilawula amaza angama-ultrasonic kwinqanaba elithile emzimbeni kwaye libhubhisa iifowuni ezingafunekiyo. Ngaphezu koko, izicubu ezikufutshane, isikhumba, imithwalo yegazi kunye nokuphela kwezibilini azihlali zingathinteki. Iimvakalelo ezibuhlungu azikho ngexesha okanye emva kwenkqubo. Umphumo wecala unokuthiwa ukuphakanyiswa kwekhumba kunye nokunciphisa i-cellulite (ngokunciphisa inani lamatye e-fat). I-Ultrasound isusa ngokugqibeleleyo ukusuka kwisisu, ngamathanga, emathangeni, okhalweni. Kwinqanaba lentloko, le nkqubo ayenziwanga (inani lamanqatha alaneleyo), ngoko, aluyi kusebenza ukulungiswa kwesilwanyana.
I sixhobo sivelisa ukutshatyalaliswa kwe-ultrasonic ye-frequency frequency (220 kHz), echaphazela i-fat deposits (ngaphandle kokushisa) kunye nokutshabalalisa i-membrane yesellu yeeseli ezinamafutha. I-Fat iyancipha ibe ngamaqela alula kwaye ingena kwiistim ejikelezayo kunye ne-lymphatic. Ezinye zazo zixutywe yi-macrophages (ibhaktheriya "idla" i-debris), ezinye zifaka isibindi. Ngokuqinisekileyo isibindi sisebenza nabo, kuba "ayiboni" umahluko phakathi kwamanqatha amaninzi - umkhiqizo wenkqubo - kunye namafutha, okubangelwa kukudla.
Inkqubo enye ye-ultrasound, umthamo weethambo ezinamafutha unciphisa ngo-3-4 cm (kufika ku-500 ml). Isiphumo esiphezulu samhlanje sikwi-6 cm. Kuxhomekeke kwimimandla ethile yemetabolism kunye nokusebenza komzimba, ngoko ke uviwo olubanzi luyenziwa ngaphambi kokuba inkqubo. Ngokukodwa, uvavanyo lwegazi lwe-biochemical ukuze lichonge izifo zentsholongwane kunye neengxaki ze-lipid metabolism. Ukuba i-degree yokuqala yowesifazane yokukhuluphala (nangaphezulu), oko kukuthi, isalathisi sesiswini somzimba sikhulu kune-29, inkqubo iyachithwa. Kwakhona uhlalutyo lwenziwe nge-viral hepatitis kunye ne-ultrasound yezitho zangasese.
Inkqubo ye-ultrasound iphikisana nokukhulelwa, i-lactation, izifo zesikhumba kwindawo yokuchazwa (i-dermatitis, i-psoriasis), naziphi na izicubu, i-oncology, izifo zesibindi, i-hepatitis, kunye nentombazana engaphantsi kwe-18.
Ukutshabalalisa iiseli ezinamafutha kususwe emzimbeni ngaphakathi kweveki ezimbini emva kwenkqubo ye-ultrasound. Umtsalane osisiseko yimihla yokuqala ye-3-4. Ngelo xesha, kubaluleke kakhulu ukugcina ukutya okuphantsi kwamafutha kunye ne-carbohydrates, ngaphandle kokusela utywala ubuncinane ubuncinane ii-2 ilitha zamanzi, ungabala i-tea kunye nekhofi. Ukukhawuleza ukususwa kweetyhefu ezisuka emzimbeni, kubalulekile ukwandisa umsebenzi owenziwe ngokomzimba xa kunokwenzeka: nokuba usebenze ixesha elide kwi-gym (ukuba sele usebenza), okanye uqale ukuhamba kwimihla ngemihla.
Ikhosi efanelekileyo kakhulu yinkqubo ye-3 ultrasound inkqubo kunye nokuphuka kweeveki ezi-2-2.5. Emva kwenkqubo, ukusilalisa kwindawo yokubhenca kunceda ukukhawuleza ukurhoxiswa kwamafutha okwehlula kwi-lymph. Ezi nkqubo zifanelekile kwabesetyhini abakhulu kakhulu.
Kwakhona, inkqubo yokupompoza ioli kunye noncedo lokutshatyalaliswa kwamagxobhozo ludume kakhulu namhlanje. Ukuze uhambe kule nkqubo, kufuneka ufike kwi-aphoyintimenti kunye nodokotela okhethekileyo oya kuphakamisa indlela efanelekileyo yokunciphisa umzimba. Kodwa ukwenzela ukuba oku kwenzeke, zama ukuhlala ubeka iliso lwakho lokutya, udle ezininzi iivithamini kunye nokutya okungaphantsi okuqukethe i-carbohydrate kunye ne-cholesterol. Endaweni ye-macaroni ekudleni, yidla inyama yenkukhu ebilisiwe, ngenxa yokuba loo mveliso ibaluleke ngakumbi kunomgubo. Uze utyelele ngexesha elidliwayo. Ezi zixhobo ziyakunceda ukuba uhlale unobumba obuhle, kwaye ubuyisele umyalelo kwimpilo yakho. Siyabulela iingcebiso zethu, abaninzi abafazi balahlekelwa iikhilogram ezili-5 kunye nokunye, kwaye bahlala besimo esihle.
Ukukrazula i-Cellulite ngeendlela zeKhaya
Iimpahia ezinempumelelo kakhulu zokulahleka kwesisindo
Indlela yokukhawuleza ukususa i-cellulite?
Indlela yokujongana ne-cellulite?
Ikhaya liyakwakheka kwi-cellulite
Utyando lwePlastiki kunye ne-cosmetology: siya kuba "ngabahlobo kunye nosapho"
Isitayela sisinxibe kwiingubo, ingaphakathi kunye nokuzihombisa. Izitayela ze-Steampunk zesitayela
Iindlela zonyango zokonyango kwezifo zesini somzimba
Izindebe zamateyipu ngezandla zabo
I-pizza yaseSicilian iSfincione
Imifuno enelayisi kunye neziqholo
Iindlela ezili-10 zokugcina ulutsha kunye nobuhle
Iipropati zokutya ze-cottage cheese
Ukunwebisa kwesikhonkwane kwimilenze
Iintlobo kunye ne-berry extravaganza: i-raspberry kunye ne-apula itiye
Ikhekhe nge-anyanisi kunye noshizi